होमपेज / फिचर / एकै दिन डेढ सय आरोही सगरमाथा शिखरमा
एकै दिन डेढ सय आरोही सगरमाथा शिखरमा	20 May 2013 | 09:01am सोमबार ६ जेष्ठ, २०७०
सुशील भट्टराई Be the first to comment! 12345 (0 votes)
काठमाडौं - विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुचुरोमा आइतबार एकै दिन करिब डेढ सय आरोहीले विजयी झन्डा फहराएका छन्। झन्डै दुई महिनादेखि शिखर पुग्न आधारशिविरमा बसिरहेका संसारका ६ सय ७० आरोही शनिबार मौसमले साथ दिएपछि चुचुरोतिर लागेका थिए। सगरमाथा शिखर पुग्नै बाँकी अझै पनि करिब ४ सय आरोही छन्। तीमध्ये कोही आधारशिविर, कोही पहिलो, दोस्रो, तेस्रो क्याम्प, साउथ कोलमा छन्। उनीहरू सोमबार शिखर पुग्ने तयारीमा छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि यसपालि स्वदेश तथा विदेशका गरी ३१ दल गएका छन्। 'आइतबार १ सय ४१ आरोही सगरमाथा शिखर पुगेका छन्,' सगरमाथा आधारशिविरमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत तथा सगरमाथा आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले आइतबार टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, 'तीमध्ये कति नेपाली र कति विदेशी हुन् भन्ने विस्तृत विवरण आइपुगेको छैन।'उनले २९ विदेशी र ३५ नेपाली गरी ६४ आरोही शनिबार शिखर पुगेको जानकारी दिए। 'मौसमले साथ दिएका शनिबार मध्यरातबाट आरोहीहरू शिखरतिर लागेका थिए,' सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी टोलीबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका श्रेष्ठले भने, 'अब एक साताभित्र अधिकांश शिखर पुग्नेछन्। आइतबार १ सय ४१ जना शिखर पुगे पनि एकै दिन धेरैजना पुगेको कीर्तिमान भने होइन।'उनका अनुसार आइतबार बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेभित्र ती आरोही शिखर पुगेका थिए। सबैले दक्षिण–पूर्वी मोहोडा (नेपाली भेग) बाट आरोहण गरेका हुन्। शनिबारसम्ममा १ सय १३ जना चुचुरो पुगेका थिए। मौसम, प्राविधिक वा स्वास्थ्यका कारण केही आरोहीले आरोहण परित्याग गरिसकेका छन्। बाटो बनाएको दिन वैशाख २७ मा १२ शेर्पा र दुई आरोही शिखर पुगेका थिए। त्यस दिनबाट आरोही शिखर पुग्ने क्रम सुरु भएको हो। यसपालि वसन्त ऋतुमा जेठ ४ देखि ११ सम्मको दिनलाई चुचुरो पुग्ने उपयुक्त समय मानिएको छ। यही एक साताभित्र अधिकांश आरोही शिखर पुग्ने गरी तयारीमा लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'सोमबार एक सयजति आरोही शिखर पुग्ने सम्भावना छ,' उनले भने।त्यसैगरी नेपाली मूलका क्यानडेली सुदर्शन गौतम सम्भवतः सोमबार शिखर पुग्ने श्रेष्ठले बताए। गौतमको दुवै हात छैनन्। उनी १४ वर्षको हुँदा दुर्घटनामा परेर दुइटै हात गुमाएका थिए। शनिबार शिखर पुगेकी साउदी अरबकी २५ वर्षीया राहा मोहर्रक उनको देशकै पहिलो महिला सगरमाथा आरोही बनेकी छन्।पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत तिलक पाण्डेले यसपालि सगरमाथा आरोहण सलामी दस्तुर (रोयल्टी) तिरेर गएका ३ सय ४० मध्ये २५ आरोहीको रोयल्टी सरकारले मिनाहा गरिदिएको जानकारी दिए। नेपाल तथा भारतका सेना सम्मिलित संयुक्त दलका २५ आरोहीलाई मन्त्रिपरिषदले हालै रोयल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो दलका ११ जना आइतबार सफल भएको उनले बताए। उनका अनुसार आइतबार भारतका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी २१ वर्षका नन्सी र तासी मलिक पनि चुचुरो पुगेका छन्। सरकारले सगरमाथा जाने एकजनालाई २५ हजार अमेरिकी डलर, दुईलाई ४० हजार, तीनलाई ४८ हजार, चारलाई ५६ हजार, पाँचलाई ६० हजार, ६ लाई ६६ हजार र सातजनालाई ७० हजार डलर रोयल्टी लिन्छ।सातजना बराबर एक दल हुने र त्यसलाई ७० हजार डलर शुल्क लाग्छ। यसअघि बढीमा १० जनाको एक दल हुन्थ्यो। प्रत्येक थप आरोहीलाई १०–१० हजार डलर थप शुल्क लाग्छ। हाल एक दलमा बढीमा १५ जनासम्म बस्न मिल्छ। साधारण रुटबाहेक अन्य मार्गबाट सगरमाथा चढ्न सातजना बराबर ५० हजार डलर र प्रत्येक थप सदस्यलाई १० हजार डलर लाग्छ। अनुमति पाएको ७५ दिनभित्र आरोहण गरिसक्नुपर्छ। हिमालपिच्छे आरोहण अनुमति शुल्क फरक छ।फूर्वातासी २१ पटकको तयारीमायसपालि नेपाली आरोही फूर्वातासी शेर्पा २१औं पटक शिखर पुग्ने तयारीमा रहेका छन्। उनी शिखरसम्म बाटो बनाउन जानेक्रममा गत वैशाख २७ गते २०औं पटक चुचुरो पुगेको सगरमाथा आधारशिविरमा रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।श्रेष्ठका अनुसार फूर्वा फेरि शिखरतिर लागेका छन्। उनले एक साताभित्र शिखर पुगेर २१औं पटकको लक्ष्य पूरा गर्ने बताएका छन्। संसारमै सबैभन्दा धेरै २१ पटक सगरमाथा शिखर पुगेको कीर्तिमान नेपालकै आप्पा शेर्पाको नाममा छ। फूर्वाले यसपालि आप्पालाई भेट्ने सम्भावना छ। नेपाली अभिनेता सफलयसैबीच नेपाली चलचित्रका अभिनेता अर्जुन कार्की पनि आइतबार सगरमाथा शिखर पुगेका छन्। कार्की सेभेन समिट्स आरोहण दलको सहयोगीका रूपमा गएका थिए। एउटै दलमा सहयोगीकै रूपमा रहेकी अभिनेतृ निशा अधिकारी भने आइतबारसम्म तेस्रो क्याम्पमा पुगेको सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए। निशा सोमबारसम्म शिखर पुग्ने श्रेष्ठले बताए। पहिले आरोही भनेर प्रचार गरेका अर्जुन र निशाले रोयल्टी नतिरेको सार्वजनिक भएपछि मात्र सहयोगीका रूपमा जान लागेको बताएका थिए। शिखरबाट लाइभ!सगरमाथा शिखरबाट बेलायती आरोही डेनियल ह्युग्सले आइतबार बिबिसी टेलिभिजनका लागि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन्। सगरमाथाबाट यस्ता गतिविधि गर्न नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। तर उनले बिनाअनुमति बिबिसीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थिए। यसबारेमा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बेखबर भए पनि बिबिसी आफैंले डेनियलसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको भिडियो अनलाइन संस्करणमा राखेको छ। 'डेनियलले शिखरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको अपुष्ट खबर आएको छ,' पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत तीलक पाण्डेले भने, 'खासमा के भएको हो, अझै पुष्टि हुन बाँकी छ। शिखर पुगेको खबरमात्र भनेको भए सामान्य हो, अन्यथा गैरकानुनी काम हो।' सगरमाथामा छायांकन गर्न, वृत्तचित्र खिच्न, कुनै टिभी वा रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए। Tweet Related items
निशाले फेसबुक स्ट्याटस डिलिट गरिन् आर्मी हेलिकप्टरमा हिरोइन! निशाले भनिन् स्वर्ग पुगे जस्तो भयो सगरमाथाबाट ओर्लिन झन् गाह्रो : निशा अधिकारी नायिका निशा अधिकारी सगरमाथाको चुचुरोमा प्रतिक्रिया
मनिषाका प्रेमी भन्छन्ः बियर खाएको थिएँ, राती ११ बजे पासो लगाएको देखेँकाठमाडौं–मनिषा घर्ती मगरको शव पोष्टमार्टमका लागि नवलपरासीबाट काठमाडौं तर्फ ल्याइदैछ। टिचिङ अस्पतालमा शवको पोष्टमार्टम हुने नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए।'काठमाडौंमा एक्सपर्ट बाट पोष्टमार्टम र फरेन्सिक टेस्ट गर्ने...	गुँड निर्माणमा व्यस्त बया तोप चरा (फाेटाेफिचर)काठमाडौं- नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका चरामध्ये रंगीन चरा 'बया तोप चरा, (वेवर्सबर्ड) को परिचय भिन्न छ। कलात्मक शैलीमा अग्ला रुखहरुमा गुँड निर्माण गर्ने हुँदा यसलाई इन्जिनियर चरा समेत भन्ने गरिन्छ।
कोकिन तस्करीमा दाउद सञ्जालकाठमाडौं- जाली नोट, सेतो र खैरो हेरोइनको कारोबारपछि पहिलोपटक पाकिस्तानी माफियाको संलग्नता कोकिन कारोबारमासमेत देखिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पहिलोपटक कोकिन कारोबारमा पाकिस्तानी माफियाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गरेको हो। ब्युरोका...	चुरेमा फेरि विनाशलीलाकाठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) व्यवस्था खारेज गरेलगत्तै चुरे क्षेत्रमा फेरि विनाशलीला सुरु भएको छ। जिल्ला विकास समितिकै अनुमतिमा चुरेका संवेदनशील क्षेत्रमा अत्यधिक परिमाणमा उत्खनन भइरहेको तथ्य...	बलात्कृतलाई निरन्तर 'पीडा'दोलखा- मेलुङकी १४ वर्षीया किशोरी गत माघको एक साँझ गाउँकै एउटा विवाह भोजबाट घर फर्कदै थिइन्। पाँचजना केटाले उनलाई घेरा हाली कुलोछेउको गहुँबारीमा लगेर जबर्जस्ती गरे। अर्धचेत उनलाई त्यहीँ छाडेर...	दाइजो नदिँदा छोरी 'गायब'वीरगन्ज- दाइजोको माग आफूहरुले पूरा गर्न नसकेपछि छोरीलाई बिहेको पाँच वर्षपछि उसका ससुराल पक्षले गायब पारेेको भन्दै पर्सा, घोडदौरा पिपराकी चम्पा देवी प्रहरीकहाँ धाउन थालेको वर्ष पुग्न लागेको छ। लिखित जाहेरी...	यौन जिज्ञासा मेट्न बलात्कारकाठमाडौं- राजधानीका बाह्रवर्षे एक बालकलाई जब वयश्क छिमेकीले मोबाइलमा अश्लील सिनेमा देखाए, उनको बालमस्तिष्कमा त्यसको गहिरो छाप पर्योर। त्यसले उनको मस्तिष्कमा जन्मिएको जिज्ञासाले अन्ततः जघन्य अपराधतिर डोहोर्यायो।	नेपाललाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने उद्‍घोषलुम्बिनी- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी गुरुयोजना छिटो सम्पन्न गरेर समग्र लुम्बिनीक्षेत्र विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। बुद्धसँग जोडिएका रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका ऐतिहासिक संरचना संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको...	फिचर	मनिषाका प्रेमी भन्छन्ः बियर खाएको थिएँ, राती ११ बजे पासो लगाएको देखेँकाठमाडौं–मनिषा घर्ती मगरको शव पोष्टमार्टमका लागि नवलपरासीबाट काठमाडौं तर्फ ल्याइदैछ। टिचिङ अस्पतालमा शवको पोष्टमार्टम हुने नवलपरासीका...	गुँड निर्माणमा व्यस्त बया तोप चरा (फाेटाेफिचर)काठमाडौं- नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका चरामध्ये रंगीन चरा 'बया तोप चरा, (वेवर्सबर्ड) को परिचय भिन्न छ।...	कोकिन तस्करीमा दाउद सञ्जालकाठमाडौं- जाली नोट, सेतो र खैरो हेरोइनको कारोबारपछि पहिलोपटक पाकिस्तानी माफियाको संलग्नता कोकिन कारोबारमासमेत देखिएको छ।...	चुरेमा फेरि विनाशलीलाकाठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) व्यवस्था खारेज गरेलगत्तै चुरे क्षेत्रमा फेरि विनाशलीला सुरु...	बलात्कृतलाई निरन्तर 'पीडा'दोलखा- मेलुङकी १४ वर्षीया किशोरी गत माघको एक साँझ गाउँकै एउटा विवाह भोजबाट घर फर्कदै थिइन्।...	भर्खरै...